किन लगाए अनुपविक्रमले नाकमा फुली ? « Ramailo छ
किन लगाए अनुपविक्रमले नाकमा फुली ?
कलाकार अनुप विक्रम शाही ह्याण्डसम छन् । तर पनि उनी फिल्ममा भिलेनको भूमिका गर्छन् । उनी आफ्नो राम्रो लुक्सलाई बिगार्छन् । फिल्म ‘कमलेको बिहे’ र ‘हुर्रे’ मा अनुपले यस्तै गरेका छन् । अर्को एक नयाँ फिल्मका लागि पनि अनुप नयाँ अवतारमा प्रस्तुत हुँदैछन् ।
नाम र ‘क्रु मेम्वर’ गोप्य राखिएको फिल्मको लागि अनुपले आफ्नो नाक छेडेका छन् । ‘मैंले पहिलो पटक नाक छेडेको हुँ’, अनुपले भने, ‘हरेक फिल्ममा केही फरक गरौं भन्ने कोशिस गर्छु ।’ फिल्मको छायाँकन नसक्दासम्म आफुले नाकमा फुली लगाउने उनले बताए । सबै छायाँकन विदेशमा हुने फिल्मको चाँडै नै प्रेसमिट गरेर जानकारी दिइने अनुपको भनाई छ । अनमोल केसी स्टारर ‘कृ’ मा अनुप भिलेनको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।